Waddooyinka magaalada Muqdisho oo maanta gebi ahaan wada xiran iyo dhaq-dhaqaaqii gaadiidkana wada joogsaday. | JILYAALE_ONLINE
Waddooyinka magaalada Muqdisho oo maanta gebi ahaan wada xiran iyo dhaq-dhaqaaqii gaadiidkana wada joogsaday.
Wararka ka imaanayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta gebi ahaanba aanan shaqeyneyn dhaq dhaqaaqii kala duwanaa ee ka jirey wadada isku xirta Muqdisho iyo Gobolka Shabeelada hoose.
Balse xirnaanshaha wadadan ayaa timid ka dib markii saakay Ciidamada copy-ga Ethiopia oo wadadaas ku soo safrayey dhowr weerar oo qaraxyo ah halkaa la gula beegsadey.
Ciidamada ayaa gebo ahaanba xanibey isu socodkii kala duwanaa ee ka jirey wadada dheer ee isku xirta Magaalada muqdishiyo, iyo Gobolka Shabeelada hoose.
Hase ahaatee gaadiidkii kala duwanaa ee ka dhex shaqeyn jirey deegaanka Ceelasha Biyaha, Afgooye iyo Magaalada Muqdisho ayaa dhamaan dhaq dhaqaaqyadoodu is taageen.
Dhanka kale gaadiidkii saaka ka baxey Magaalada Muqdisho ayaa dib ugu soo noqdey Muqdisho ka dib markii ciidamadu is hor taageen in ay socdaalkooda sii wataan.
Hase yeehee isgoyska KM4 ayaa xirnaa, ka dib markii ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda KMG ah ee la shaqeys agumeysiga Itoobiya isku soo fidiyeen wadooyinkaas Ciidamadan ayaa ahaa kuwo rasaas xoogan dhan walba u ridayey, taas oo qof rayid ah uu ku dhaawacmey.
← Qoyskii Jarmalka ahaa oo afduubka loogu haystay woqooyiga Soomaaliya oo lagu soo daayay lacag gaaraysa Hal-Milyan doolar.
Sarkaal lagu magacaabi jiray Axmed Cabdi Cumar oo Hogaaminayey Ciidanka Boliska dowladda KMG oo la diley. →